अभिमत: के गर्दै छन् नेताका छोराछोरी
के गर्दै छन् नेताका छोराछोरी
अधिकांश नेताका छोराछोरी राजनीतिबाहिर
राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडेका नेपाली राजनीतिका अधिकांश शिखर व्यक्तित्वहरूले आफ्ना सन्तानलाई भने राजनीतिमा होमेनन् । कतिपयका छोराछोरी स्वेच्छिक रूपमा राजनीतिमा लागेका छन् र स्थापित पनि छन् भने अधिकांशका गुमनाम छन् ।
कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाका छोरा प्रकाश र डा. शशांक राजनीतिमा सक्रिय छन् । शशांक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र सभासद् छन् भने प्रकाश पूर्वराजालाई समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेस (राष्ट्रवादी) मा सक्रिय छन् । शाही शासनकालमा मन्त्री भएपछि राजनीतिक छवि बिगारेका प्रकाश पहिलाजति राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । प्रकाशका सन्तान पनि राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । छोरी मनीषा बलिउडमा सक्रिय छिन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठका छोराछोरी राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । छोरा उमेशलाल श्रेष्ठ व्यापारी हुन् भने छोरी उषा सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा विज्ञान शिक्षिका हुन् । पुष्पलालकी श्रीमती साहना हाल एमाले नेतृ हुन् ।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता पार्टीको विदेश विभाग-प्रमुख तथा हाल परराष्ट्रमन्त्री छिन् । झड्केला छोरा सुरेश भने राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । उनी एउटा प्रेस सञ्चालन गरेर गुजारा चलाइरहेका छन् । सुजाताकी छोरीचाहिँ राजनीतिमा छैनन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका पाँच छोरी र एक छोरा छन्, जो राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । सचिव युवराज भुसालकी छोरीसँग बिहे गरेका हुन् रामचन्द्रका छोराले ।
गोविन्दराज जोशीका दुवै छोरा अमेरिकामा छन् । उनीहरू व्यापारमा संलग्न रहेको बुझिएको छ ।
खुमबहादुर खड्काका एक छोरा र एक छोरी भारतमा अध्ययनरत छन् । उनीहरू राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका छोराछोरी सेन्ट जेभियर्समा पढ्छन् । छोराहरूमध्ये अनमोल कक्षा १० मा र अनुकूल कक्षा ६ मा अध्ययनरत छन् ।
गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहका दुई सन्तानमध्ये जेठा छोरा डा. मनोज सिंह राजनीतिमा सक्रिय छन् । विगतमा मधेसी जनअधिकार फोरममा रहेका उनी हाल नवजनवादी मोर्चामा आबद्ध छन् । सिंहका कान्छा छोरा सुबोध भने इन्जिनियर छन् ।
एमालेका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका छोरा-छोरी दुवै राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । छोरा डा. प्रकाश अधिकारी प्राध्यापन पेसामा संलग्न छन् । छोरी गृहिणी हुन् । माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार खगेन्द्र खड्काकी श्रीमती हुन् मनमोहनकी छोरी ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डर एवं कांग्रेसनेता गणेशमानका दुई छोरा र एक छोरीमध्ये एकजना मात्रै राजनीतिमा छन् । गणेशमानपुत्र प्रकाशमान कांग्रेसका उपसभापति छन् भने उनका भाइ प्रदीपमान अमेरिकामा प्राध्यापन पेसामा आबद्ध छन् । छोरी रीता वैद्य बालमन्दिरमा कार्यरत छिन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका तीन छोरी र एक छोरा पार्टीमा आबद्ध छन् । छोरी रेणु माओवादीको संविधानसभा सदस्य हुन् । छोरा प्रकाश बाबुका सहयोगी भएर राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनी हाल राज्यसमिति सदस्यको हैसियतमा छन् ।
मोहन वैद्य किरणका तीन छोरी छन् । तीनैजना सक्रिय राजनीतिमा छन् । जेठी छोरी लताको विवाह भारतको सिलिगुडीमा भएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनी प्रवासको संगठनमा आबद्ध छिन् । माइली छोरी चेतना किरणकै मातहतमा रहेको संगठन विभागमा कार्यरत छिन् । कान्छी छोरी सिर्जना पशुपति क्याम्पसमा पढ्दै छिन् र विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।
माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईकी एक मात्र छोरी मानुषी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छिन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिरहेकी उनी त्रिवि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकी सचिव हुन् । उनी विगतदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।
माओवादीकै नेता पोष्टबहादुर बोगटीका दुई छोरी प्रभा र प्रतिभा छन् । छोरा रवि बोगटी २०५९ असार ७ गते सुरक्षाकर्मीबाट मारिए । युद्धकालमा जनमुक्ति सेनाको प्लाटुन कमान्डर भएकी प्रभा हाल माओवादीसम्बद्ध सहिद प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन् । अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा प्रकाशसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएर सम्बन्ध-विच्छेद गरेकी उनी प्रतिष्ठानको कार्यालय सचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् । कान्छी छोरी प्रतिभाको विवाह दाङमा भएको छ । उनी पनि माओवादीको सामान्य कार्यकर्ता हुन् । माओवादीका अर्का नेता सिपी गजुरेलका दुई छोरा र दुई छोरीमध्ये जेठा छोरा सञ्जीव राजनीतिमा सक्रिय छन् । सञ्जीव बाबुको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । र, बाँकी भने माओवादीका शुभेच्छुक र समर्थक मात्रै छन् ।
माओवादीनेता कृष्णबहादुर महराका दुई छोरा राजनीतिमा सक्रिय छन् । जेठा छोरा निर्मल महरा एटम जनमुक्ति सेनामा कार्यरत छन् भने कान्छा राहुल महराका सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका एक मात्र छोरा निर्भीक पनि राजनीतिमा छैनन् । उनी अमेरिकामा विज्ञान विषय अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालका छोरा सौरभ र छोरी राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । छोरा सौरभ इन्जिनियरिङ र छोरी मेडिकल साइन्स पढिरहेका छन् । दुवैलाई राजनीतिप्रति नेपाल-परिवारले प्रेरित गरेन । छोरी भारतमा अध्ययन गरिरहेकी छिन् । एमालेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमका छोरा हरीशदेव गौतम काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत उपत्यका नगर विकास समितिका इन्जिनियर हुन् । वामदेवका तीन छोरीमध्ये दुईको विवाह भइसकेको छ । कान्छी छोरी स्नातक तहमा अध्ययनरत छिन् । एउटी छोरी चितवनका नेता जागृत भेटवालकी बुहारी हुन् ।
स्वर्गीय मदन भण्डारीका दुवै छोरी मेडिकल डाक्टर छन् । आमा विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भएर पुल्चोकस्थित क्वार्टरमा बसे पनि छोरीहरू उषाकिरण र निशाकुसुम चाबहिल रामहिटीस्थित घरमा बस्दै आएका छन् । एमालेका नेता मोदनाथ प्रश्रतिका छोरा डा. विजय पौडेल हाल एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन् । कृषि अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका हुन् पौडेलले ।
नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीका एक छोरा र एक छोरी राजनीतिमा संलग्न छैनन् । छोरा सरोज अमेरिकामा इन्जिनियरिङ पढ्दै छन् भने छोरी प्रभा चीनमा मेडिकल साइन्स अध्ययन गरिरहेकी छिन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेका सन्तति पनि राजनीतिमा होमिएका छैनन् । दुई छोरा छन् बिजुक्छेका । जेठा छोरा सुवेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका छन् भने कान्छा छोरा सुभान स्नातक प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अझै पनि भूमिगत रहेका नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहका तीन छोरा र एक छोरीमध्ये राजनीतिमा जेठा छोरा सक्रिय छन्, दुई छोरा बालकै छन् । छोरी पूर्वा सिंह पत्रकारिताबाट हाल निष्कृय छिन् । उनी विगतमा नेपाल वान टेलिभिजनमा कार्यरत थिइन् । त्रिविमा दर्शनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका जेठा छोरा समीर मसालका कार्यकर्ता हुन् । माइला छोरा स्कुल पढिरहेका छन् भने कान्छा एकवर्षे बालक छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका दुई छोरा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । कुनै बेला रक्तिम परिवारका कलाकार रहेका उनीहरू राजनीतिबाट अलग्गिएका छन् । एउटा छोरा सचित्र केसी दक्षिण कोरियामा सुंगुर पालेर बसेका छन् ।
राप्रपा नेपाका अध्यक्ष कमल थापाका चार छोराछोरी राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । जेठी छोरी प्रसिद्धि बेलायतमा इन्जिनियर छिन् । माइली डा. प्रगति थापा नर्भिक अस्पतालमा डाक्टर छिन् भने कान्छी छोरी प्रतिष्ठा काठमाडौंको प्रतिष्ठित बैंकमा जागिरे छिन् । छोरा सुवास पाँचतारे होटलहरूको व्यवस्थापन गर्ने एउटा संस्थामा कार्यरत छन् । अमेरिकामा डिभी परेर गएका सुवास दुई वर्षअघि नेपाल फर्केका थिए । पारिवारिक निकटस्थहरूका अनुसार अध्यक्ष थापा छोराछोरीलाई लो प्रोफाइलमा राख्न चाहन्छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणाका दुइटी छोरी छिन् । रुसी नागरिकसँग विवाह गरेकी उनकी जेठी छोरी राजनीतिमा छैनन् भने कान्छी छोरी देवयानी हाल भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जागिरे छिन् । तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रकी प्रेमिका रहेकी उनी दरबार-हत्याकाण्डपछि नेपालमा स्थायी रूपले बसोवास गरेकी छैनन् । भारतीय नागरीकसँग विवाह गरेर उतै बसेकी छिन् देवयानी । गत वर्ष अध्यक्ष राणाको चुनाव प्रचारका लागि उनी सिन्धुपाल्चोकका केही गाउँ पनि घुमिन् र भाषण गरिन् । तर, तत्काल उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन ।
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका छोराछोरी पनि राजनीतिमा छैनन् । राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम युएनएचसिआरमा कार्यरत छोरा सुनील हाल कोसोभोबाट सुडानको खार्तुममा सरुवा भएका छन् । तीनजना छोरीहरू गृहिणी छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरी सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । उनका छोरा तीन वर्षअघि सर्लाहीको मलंगवामा ट्रयाक्टर दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका थिए । तमलोपाकै नेता हृदयेश त्रिपाठीका दुई छोरी र एक छोरा पनि राजनीतिबाट टाढा छन् । मधेसी नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, जेपी गुप्ता र विजय गच्छदारका छोराछोरी पनि राजनीतिमा सक्रिय छैनन् ।
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 10:28 AM